कोरोना भाइरसबारे फैलिएका अफवाह र सत्यता, यी हुन् हरेक ब्यक्तिले जान्नै पर्ने कुराहरु #FairFactCheck — Fair Nepal
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (COVID-19)ले अहिले विश्वब्यापी माहामारीको रुप लिएको छ । चीनको वुहान शहरबाट फैलिन शुरु गरेको यो भाइरस अहिले विश्वका अधिकांश मूलुकमा फैलिसकेको छ । छिमेकी भारतमा समेत यो भाइरस केही दिन यता तीब्र रुपमा फैलिरहेको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म एक जनामा यो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने करिब ५ सय भन्दा बढीमा आशंका लागेर गरिएको परीक्षणमा कसैमा पनि संक्रमण देखिएको छैन । तर नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम क्षेत्रका रुपमा विश्व सवास्थ्य संगठनले समेत राखेपछि आम जनमानसमा यो त्रास भने निकै फैलिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)ले यस भाइरसबाट बच्नका लागि एडभाइजरी जारी गरेको छ । आम मानिसलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनका लागि सावधानी अपनाउन भनेको छ ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जाल र अनाधिकृत केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुमा कोरोना भाइरसको विषयलाई लिएर विभिन्न खालका भ्रामक कुराहरु पनि तीब्र गतिमा फैलिरहेको छ । जसमा केही सत्य कुराहरु पनि छन् भने धेरैजसो त भ्रामक र झुट कुराहरु छन् । यसैकुरालाई मध्यनगर गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)ले कोरोना भाइरसबारे फैलिरहेको अफवाह र सत्यता बारे प्रष्ट पारेको छ । जुन कुरा हरेक नागरिकलाई थाहा हुन जरुरी छ ।
युरोप तथा अमेरिकी देशमा अहिले जसरी काेरोना भाइरस फैलिरहेको त्यसको तुलनामा नेपालमा भ्रम, त्रास र कालोबजारी बेजोडसँग फैलिरहेको छ । भाइरससँगै फैलिएको उपचारको अफवाहले आम मानिसलाई झन बेचैन बनाएको छ । यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुष्टी गरेका केही मिथक र सत्यता बारे चर्चा गरिएको छ । आउनुस WHO ले दिएको सल्लाहबारे यहाँ चर्चा गरौँ ।
के अल्कोहल वा क्लोरीनले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ ?
शरीरमा अल्कोहल वा क्लोरीन छर्किनाले पहिले देखि नै रहेका फैलिदैन तर यसको अत्यधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्छ । त्यसैले चिकित्सकहरुको सल्लाह अनुसार नै यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मिथक : चीनबाट आयात हुने सामाग्री सुरक्षित छैन (पैसाबाट पनि कोरोना सर्नसक्छ )
सत्य : चीनबाट आयात हुने सामाग्रीहरुमा कोरोना भाइरस हुने सम्भावना वा खतरा छैन । शोधका अनुसार भाइरस निर्जिव वस्तुमा लामोसमयसम्म जीवित रहन सक्दैनन् । चीनबाट नेपाल सामा आउन हप्तौ दिन आग्छ अहिले त्यसमाति पनि अहिले नाका बन्द गरिएको छ ।
मिथक : घरपालुवा जनावरबाट पनि फैलिन सक्छ भाइरस
सत्य : यस कुराको अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला परेको छैन । कुनै घर पालुवा कुकुर विरालो वा कुनै अन्य जन्तुबाट यो भाइरसको संक्रमण फैलिएको घटना देखिएको छैन । तर जीवजन्तुसँगको सम्पर्कमा आएपछि राम्रोसँग साबुन पानी वा ह्याण्डस्यानेटाइजरले हात धुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
मिथक : एन्टी–निमोनिया भ्याक्सिनले कोरोना भाइरस रोक्छ
सत्य : निमोनियाको टीके, जस्ता न्यूमोकोकल भ्याक्सिन तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (एचआईबी) भ्याक्सिन, कोरोना वायरसबाट बचाउन सक्दैन । यस भाइरससम्बन्धि कुनै खोप बनेको छैन । अमेरिकामा परीक्षण गरिएको खोप पनि प्रमाणित भएको छैन ।
मिथक : लसुन वा कुनै घरेलु जडिबुटी सेवन गर्दा कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ ।
सत्य : फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अहिले यस्ताखालका अफवाहहरु ब्यापक रुपमा फैलिरहेको छ । जसमा दाबी गरिएको छ की लसुनको सेवन गर्नाले कोरोनाको संक्रमण हुँदैन । यो गलत हो ।
बृद्ध र केटाकेटी कसलाई बढी खतरनाक ?
बृद्धबृद्धा एवं बच्चाहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा बढी हुन्छ किनकी उनीहरुमा रोग प्रतिरक्षा प्रणाली तन्नेहरीहरुको तुलनामा कमजोर हुन्छ । यसका साथै बृद्ध पहिले नै मधुमेह, हृदयरोग लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरुबाट ग्रसित हुने भएकाले कोरोना भाइरसको बढी प्रभाब बृद्धबृद्धामा बढी पर्न सक्छ यो भाइरसबाट मर्नेहरु पनि अधिकांश बृद्धबृद्धा र अन्य रोगहरुबाट ग्रसित भएकाहरु रहेका छन् ।
मिथक : एंटीबायोटिक्स कोरोना संक्रमणको उपचारमा सहयोगी छ ।
सत्य : एंटीबायोटिक्स कोरोना भाइरसबाट बचाउनका लागि सक्षम छैन । यसले केवल ब्याक्टेरियाका लागि मात्रै काम गर्दछ । कोरोना त एक प्रकारको भाइरस हो । ह्युमन भाइरसको रुप लिइसकेको हुनाले विश्वब्यापी भयावह सिर्जना भएको छ ।
मिथक : चाइनीज फूड खान पनि खतरा
सत्य : यो कुरा पूर्ण रुपमा गलत हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै चाइनिज खाध्य सामाग्रीबाट भाइरस फैलन सक्ने कुरालाई सही मानेको छैन । त्यसैले ढुक्क हुनुस चाइनिस खाध्य सामाग्रीको सेवनले कोरोनाको खतरा छैन ।
मिथक : गोबर या गौमूत्रबाट पनि हुन्छ कोरोनाको उपचार
सत्य : अहिले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको गलत सूचना यो पनि एक हो । यो हल्ला मात्रै हो यसको कुनै प्रमाण छैन । कुनै वैज्ञानिक आधार पनि छैन ।
मिथक : गर्मीमा यो भाइरस फैलिदैन
सत्य : यस कुराको पनि कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन । यद्यपी चिसो मौषमको तुलनामा गर्मीमा कुनै पनि भाइरस फैलन सम्भावना कम भएको हुनाले त्यसै अनुरुप कोरोना पनि नफैलिन सक्छ भन्ने अनुमान मात्रै हो । बैज्ञानिकहरुले पुष्टी गरेका छैनन् ।
कुनै पनि निश्चित कम्पनीको साबुन वा अन्य कुनै स्यानिटाइटर प्रयोग गरेर बारम्बार हात धुनाले कोरोनाको संक्रमण हुँदैन भन्ने कुरा पनि सब हल्ला मात्रै हुन् । सत्यता छैन तपाई जुनसुकै कम्पनीको सावुन वा अल्कोहल युक्त ह्याण्डवास प्रयोग गरेर राम्रोसँग हात धुँदा विभिन्न खालका संक्रमणहरुबाट बच्न सक्नुहुन्छ । भिडभाड भएको ठाउँमा नजानुस, रोग संक्रमित ब्यक्तिहरुको सम्पर्कमा नजानुस, प्रभावित मूलुक वा क्षेत्रबाट आएको ब्यक्तिको आसपास नजानुस्, मास्क प्रयोग अनिवार्य होइन भिडभाडमा वा बिरामीको आसपासमा हुनुहुन्छ भने मात्र प्रयोग गर्दा हुन्छ । स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुस् कोरोना भाइरस मात्र होइन कुनै पनि संक्रमणबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ ।
Previous Previous post: आजको राशिफल हेर्नुस्, र पशुपतिनाथकाे दर्शन गर्नुस्
Next Next post: लोकसेवा आयोगको सबै परीक्षा स्थगित, अब कहिले हुन्छ ?
सुनको मूल्य फेरि घट्याे
Lok Sewa Taayari शिक्षा
फेयर नेपाल November 25, 2020 No Comments
बैठकको तरिका १. कार्यालयमा बैठक व्यवस्थापन गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।  कार्यालयमा नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, सेवा प्रवाहलगायतका विविध विषयमा आपसी छलफल…
लोकसेवा तयारी सामग्री ( ३० वस्तुगत प्रश्नोत्तर)
१. अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले महिला टी–२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले तय गरेको छ ?  सन् २०२३ फेब्रुअरी ९–२६, दक्षिण अफ्रिका । – आईसीसीले महिला…
Lok Sewa Taayari News शिक्षा
स्नातक तहको परीक्षा तालिका सार्वजनिक ( तालिकासहित )
फेयर नेपाल November 20, 2020 No Comments
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । गएको वैशाखमै हुनुपर्ने परीक्षा कोरोना भाइरसको कारण स्थगित भएको थियो ।…
फेयर नेपाल November 11, 2020 No Comments
के छन् कर्मचारीका सुविधा ? १. नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूलाई हाल के–कस्ता सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ ? उल्लेख गर्दै निजामती सेवालाई अझै आकर्षित गर्न सुुविधाका…